काठमाडौँ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्ट सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघको ४९औँ स्थापना दिवसका अवसरमा नेविसंघ काठमाडौँले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘शुभकामना आदानप्रदान’ कार्यक्रममा देउवाले
मालपोत कार्यालयले खरिदबिक्री गर्न मिल्ने गरी किटान गरेको जग्गा किनेको विष्णु पौडेलको स्पष्टोक्ति
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरको जग्गा खरीदबिक्रीमा आफ्नो नाम जोडिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । बुधबार उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम बिक्री गर्ने व्यक्तिको नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता श्रेस्ता
२०/२५ जना जिल्ला सभापतिको विशेष अधिवेशन ‘फेस’ गर्छुःदेउवा
विराटनगर । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव आए आफू ‘फेस’ गर्न तयार रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभपति देउवाले २० देखि २५ जना सभापतिले बोलाउने विशेष अधिवेशनको सामना गर्ने स्पष्ट पारे । सभापति देउवाले स्व गिरिजाप्रसाद
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हावाहुरी प्रभावित क्षेत्र बारा र पर्साका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेका छन् । मंगलबार घटनास्थल पुगेका देउवाले यति ठूलो विपत्तिलाई सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । निकै ठूलो मानविय एवम् भौतिक क्षति पुगेकाले तत्काल राष्ट्रिय शोकको
चितवन, चैत १० गते । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र गुट हुनु स्वाभाविक भए पनि गिरोह हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताउनु भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “गिरोहले पार्टी सञ्चालन गरे त्यो खतरनाक हुन्छ ।” नेता
काठमाडौँ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो हत्या गर्न खोजेको भनेर सफेद झूट बोलेको बताएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपाले आफ्नो पार्टीको व्यक्ति हत्या गर्ने कुनै नीति र योजना नरहेको प्रष्ट पारेको छ । सो पार्टी निकट इरातो खबर डटकमका
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टी अनधिकृत झुण्ड भएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूह हत्या हिंसा, लुटपाट, तोडफोड गर्ने एउटा समूहमात्र भएकोले त्यस्ता गतिविधि बन्देज गर्न रोक लगाएको बताए। प्रधानमन्त्रीले
विराटनगर, फागुन २९ गते । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न नेकपा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनु राम्रो कार्य भएको बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग आज सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै उहाँले सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति तोडफोड, जनतामा त्रासको
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ माथि हतारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको बताएका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने,‘विप्लवका क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्ने क्याविनेटको निर्णयबारे पार्टीमा
केपी ओलीको राष्ट्रवाद सिके राउतको पाउमा पोखियो : प्रवक्ता शर्मा
बागलुङ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रबाद सिके राउतको पाउमा पोखिएको आरोप लगाएका छन । उनले केपी ओलीलाई प्रश्न सोध्दै भने,'प्रधानमन्त्री जी सिके राउतसँग कस्तो खालको राष्ट्रबाद हो ? के सिके राउतको पाउ मोल्ने यही राष्ट्रबाद ?' प्रवक्ता शर्माले
अधिकारीप्रति नेकपाद्वारा शोक प्रस्ताव, फागुन २३ गते श्रद्धाञ्जलि सभा गर्ने निर्णय
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको आज सम्पन्न बैठकले फागुन १८ गते राजधानीको ह्याम्स अस्पतालमा निधन हुनुभएका पार्टीका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै देशभरका सबै पार्टी कार्यालयमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले
निर्मलाका परिवारसँग देउवाले भने,‘न्यायको आश नमार्नू’
कञ्चनपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तका परिवारसँग भेट गरेका छन् । भेटमा देउवाले निर्मलालाई न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता गरे । उनले परिवारसँगको भेटमा भने,‘आफू र आफ्नो पार्टी निर्मलालाई न्याय दिन लागि पर्नेछ ।’ गत साउन
कमल थापा भन्छन् ‘राजतन्त्र फालेर १२ वर्षमा मुलुकले के पायो ?’
काठमाडौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राजतन्त्र हटाएर मुलुकले १२ वर्षको अवधिमा कुनै पनि प्रगति नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । राजतन्त्र फालेर मुलुकलाई केही फाइदा नपुग्ने भन्दै उनले राजतन्त्रबारे पुनर्विचार गर्न ठूला राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गरो छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले
काठमाडौं । तल्लो तहका पार्टी इकाइ र जनवर्गीय संगठन एकीकरणका लागि २ महिना अघि गठित कार्यदललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले भंग गरेको छ । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले पार्टी एकताको बाँकी काम सचिवालयले गर्ने र त्यसलाई स्थायी समितिबाट अनुमोदन गराउने भन्दै
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारको एक बर्षको काम देखेर जनता निराश देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । दुइ तिहाइको सरकारसँग जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुरुप प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेकाले जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा घटेको उनीहरूको टिप्पणी छ । बुधबार रिपोर्टस क्लब नेपालले
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समितिमा पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला निकट समूहले नेतृत्व पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ । सिटौला निकट निवर्तमान महामन्त्री कुन्दन काफ्लेले ११ औँ महाधिवेशनमा सबैभन्दा वढी मत आफूले ल्याएको भन्दै नेतृत्व दाबी गरेका हुन् । ‘ ११ औं अधिबेशनमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर २२ बुँदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । पार्टीले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीलाई २२ बुँदे मागपत्र बुझाएर आन्दोलनको
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष पूरै असफल भएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले सरकारले एक वर्षमा
राणा र लोहनीको पदभार,राजतन्त्र ब्युँताउने घोषणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्त रुपमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । बुधबार दिउँसो पार्टी कार्यालय चावहिलमा आयोजित कार्यक्रममा दुबै अध्यक्षले हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र पुनर्वहाली गर्ने प्रतिवद्धता
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । बुधबार पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित ‘जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली’ सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने,‘पार्टी एकता काम केहीदिनमै सकिन्छ,त्यसपछि पार्टी
सरकार र कांग्रेस असफल, अब राजतन्त्र फर्किन सक्छ: अध्यक्ष राणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दुवै असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘यो एक वर्षमा सरकार पनि असफल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि असफल भयो । दुवै असफल भए । उनीहरुले अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन् ।’ मंगलबार
नेवि संघका अध्यक्ष नैनसिंहद्वारा राजीनामा
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पटक–पटक म्याद थप्दापनि महाधिवेशन गराउन नसकेपछि सोमबार अध्यक्ष महरले पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवा समक्ष राजीनामा दिएका हुन् । उनले आफूले स्ववियू निर्वाचन गर्ने योजनामा अघि वढेका बेला भएपनि पार्टी भित्र कार्यसमितिको
गोरखा । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पार्टी महाधिवेशनलाई पछाडी धकेलेर काङ्ग्रेसलाई फाइदा नहुने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन गोरखाले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता थापाले महाधिवेशनलाई दुई/अढाइ वर्ष पछाडि धकेल्दा यसले पार्टीलाई बलियो नबनाउने भन्दै तत्काल महाधिवेशनको
राजतन्त्र ल्याउने खेल भइरहेको छःचित्र बहादुर केसी
बुटबल । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले विदेशी शक्ति केन्द्रले कम्युनिस्ट सरकार नरुचाएकाले राजतन्त्र ल्याउने चलखेल शुरू गरेको बताएका छन् । दुइ तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारलाई खासगरी पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले नरुचाएको उनको दाबी छ । शनिवार बुटवलमा प्रगतिशील
नेवि संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरलाई लगायत आधा दर्जन विद्यार्थी नेतालाई प्रहरीले काठमाडौंको बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ। मंगलबार नेवि संघले अध्यक्ष महरको नेतृत्वमा वानेश्वरमा निकालेको जुलुसबाट महर सहितका नेताहरूलाई पक्रउ गरिएको हो । शनिबार पोखरामा भएको घटनामा झुटो मुद्दा
भेनेजुयला प्रकरणमा प्रचण्डकै विज्ञप्ति आधिकारिक:नेकपा
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले भेनेजुयलाको राजनीतिक घटनाक्रमबारे सरकार र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ फरक नभएको भन्दै प्रचण्डको विज्ञप्तिको बचाउ गरेको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र कतिपय टिप्पणीकर्ताहरूले नेपालको कुटनीतिक मर्यादाविपरित नेपाल सरकार र पार्टीको भनाइ
चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने
काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको बिरोधका बाबजुद राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। बिहीबारको वैठकमा विधेयकमा कांग्रेस र राजपाका सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, उनीहरुको संशोधन प्रस्ताव भने पास हुन सकेन। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभाबाट
कांग्रेसले आन्दोलन रोक्दैनःप्रवक्ता शर्मा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध आन्दोलन नरोक्ने बताएको छ । बुधबार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन मार्फत पार्टीले पूर्व निर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम नरोक्ने बरु आन्दोलन प्रभावकारी बनाउने चेतावनी दिएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले
स्ववियु निर्वाचनबारे विद्यार्थी संगठनका आ–आफ्नै धारणा
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले स्ववियु निर्वाचनमा आफ्नो संगठनको रगतको साइनो भएकोले निर्वाचनबाट नभाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफूहरु निर्वाचनबाट कुनैपनि हालतमा नभाग्ने जिकीर गरे । उनले भने,‘तर, सरकारले
प्रधानमन्त्री निवासबाट नेवि संघका ३० जना विद्यार्थी पक्राउ
काठमाडौं। सरकारले विपक्षीको आवाज नसुनेको भन्दै सिठ्ठी जुलुसमा निकालेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको ३ नं गेट निषेधित क्षेत्र भित्र सिठ्ठी जुलुस निकालेको भन्दै प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ